Nuorisoasiainkeskus || Xuduudaha Fur!
Xuduudaha Fur!Soo qaado kaarka xubinnimada!
Macluumaad siin iyo hagid dadka doonaya kaarka xubinnimada
Xarumaha dhalinyarada ee Helsinki, Espoo, Vantaa iyo Kauninainen hada waxay wadaagaan hal kaar oo xubinnimo, waana bilaash. Hal kaar oo xubinnimo ayaad uga qaybgelikartaa dhacdooyinka arimaha dhalinyarada dagmooyinkaan aan soo sheeganay xuduud la aan.
Hadii aadan haysan kaarka xubinnimada oo shaqaynaya, interneka kala soo bax soona buuxi foomaka xubinnimada, kana sixiix qofka masuulka kaa ah (hadii aad ka yartahay 18 sano) una soo celi aqalka dhalinyarda. Kaarka xuninnimada waxaa ku siinaya aqlaka dhalinyarada markii aad foomka u dhiibtid.
Kaarka xubinnimadu wuxuu kashaqaynaya dhmaan Xarumaha dhalinyarada ee agagaarka caasimada sida Helsinki, Espoo, Vantaa iyo Kauniainen waxaana la siinayaa inta da dooda ay ugu sareyso 29 sano. Kaarka xubinnimada oo la cusbooneysiiyo wuxuu shaqaynayaa 1.8.2012-31.7.2013.
Kaarka xubinnimadu waa bilaash, wax laga rabaana majirto qofka wata. Qaadashada kaarku wuxuu xaq kuu siinayaa inaad ka qaybgashid hawlaha nashaadaadka xarumaha dhalinyarada. Kaarka xubinnimada waxaa kale oo lagu helayaa xuquuqo ama faa iidooyin kaladuwan. Macluumaadka aad na siisay cidkale uma gudbinayno.
Xarumaha dhalinyarada ee agagaarka caasimadu waxay dhalinyarada da doodu u dhaxayso 7-29 sano siiyaan nashaadaat iyo hiwaayado ka duwan.
Xarumahan dhalinyarada ayaa ku dhalinyaro kale kula kulma, ciyaaro kaladuwan ku ciyaara kuna dhageysta muusiga. Intaas waxaa dheer koorsooyin, kaamamka baadiya loogu baxo, xaflado iyo kooxo hiwaayadeed. Meelo badan waxaa laga abaabulaa wax qabad kalagedisan, sida barashada muusiga, ciyaarta looxa lagu dulcararo (Skeitti) iyo la talinta dhalinyarada. Mar kastana waxaa goobjoog ah dad waaweyn oo arimaha dusha ka eegaya iyo shaqaale loo tababaray agaasinka dhalinyarada. Hawlahan oo dhan waxaa ka mamnuuc ah wax maandooriye ah.